United Airlines ga -achụ ndị ọrụ 593 ọkụ maka ịjụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » United Airlines ga -achụ ndị ọrụ 593 ọkụ maka ịjụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
United Airlines bụ ụgbọelu mbụ US butere ndị ọrụ ya ọgwụ mgbochi COVID-19 na mbido August. Ndị ụgbọ elu US ndị ọzọ enwebeghị mmasị ịgbaso otu ahụ, mana ha kwagara ịkwụsị nchedo ịkwụ ụgwọ maka ndị ọrụ na -agbanyeghị ọgwụ mgbochi na -enyocha ihe ọma maka nje a.
E nyere ndị ọrụ United States 67,000 ndị United States iwu ka ha nye ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi na Mọnde gara aga.
Agbanyeghị, United Airlines ga -ahapụ ndị ọrụ ka ha debe ọrụ ha ma ọ bụrụ na enyere ha ọgwụ mgbochi mana ha edozighi ihe akaebe site na njedebe.
Ndị ọrụ na -agbabeghị ọgwụ mgbochi nwere ọtụtụ izu n'okpuru iwu nchụpụ nke otu ugbu a ka a gbaa ha ọgwụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịnọ.
United Airlines nyere ndị ọrụ US 67,000 ya iwu ka ha nye ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi na Mọnde gara aga.
Ugbu a ndị ọrụ ụlọ ọrụ 593 na-eche mwepu ihu mgbe ha emeghị iwu amụma ịgba ọgwụ mgbochi nke COVID-19.
"Nke a bụ mkpebi siri ike mana mana ịchekwa ndị otu anyị abụrụla ihe mbụ anyị na-ebute ụzọ," onye isi ndị ọrụ ụgbọ elu nke Chicago bụ Scott Kirby na onye isi ala Brett Hart kwuru na ndetu ndị ọrụ.
Ezie na ọtụtụ nke United Airlines'Ndị ọrụ nabatara iwu ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọrụ 593 jụrụ ka a maa ha ụra ma ghara itinye akwụkwọ maka nnwere onwe n'ihi ihe metụtara okpukpe ma ọ bụ ahụike nke ụlọ ọrụ ahụ setịpụrụ dị ka iwu ma ọ bụrụ na enweghị ịgba ọgwụ mgbochi.
"Echiche anyị maka ịchọ ọgwụ mgbochi maka ndị ọrụ United States na United States dị mfe-ichebe ndị anyị-na eziokwu bụ nke a: onye ọ bụla nwere nchekwa mgbe a na-agba onye ọ bụla ọgwụ yana ihe mgbochi ọgwụ na-arụ ọrụ," United kwuru na ndetu ahụ.
United Airlines agbanyeghị, ga -enye ndị ọrụ ohere idobe ọrụ ha ma ọ bụrụ na ha gbara ọgwụ mgbochi ọrịa mana ha ewetaghị ihe akaebe site na oge a kara aka, ma ọ bụ ọ bụrụ na a ga -egbu ha tupu mkpebi iwu gbasara nchụpụ abịa.
Nke a pụtara na ndị ọrụ na -agbabeghị ọgwụ mgbochi nwere ọtụtụ izu ma ọ bụ ọbụna ọnwa n'okpuru iwu nchụpụ nke otu ugbu a ka ha banye ọgwụ mgbochi ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịnọ.
United Airlines kwupụtara na mbido ọnwa a na ọ ga -etinye ndị ọrụ gụpụrụ n'iwu ịgba ọgwụ mgbochi ezumike ma ọ bụ ezumike ahụike site na Ọktoba 2. Emechara mebie atụmatụ a mgbe ikpe nke ndị ọrụ isii gbara akwụkwọ rịọrọ mkpebi ahụ. Ihe dị ka ndị ọrụ 2,000 arịọla ka ewepụrụ ha.
United Airlines bụ ụgbọelu mbụ US butere ndị ọrụ ya ọgwụ mgbochi COVID-19 na mbido August. Ndị ụgbọ elu US ndị ọzọ enwebeghị mmasị ịgbaso otu ahụ, mana ha kwagara ịkwụsị nchedo ịkwụ ụgwọ maka ndị ọrụ na -agbabeghị ọgwụ na -enyocha ihe ọma maka nje a. Georgia dabeere Delta Air Lines na -akwụ ndị ọrụ na -agbabeghị ọgwụ ego mkpuchi mkpuchi ahụike $ 200 kwa ọnwa.
Dị ka ọtụtụ ụgbọ elu ndị ọzọ, mmachibido njem njem nke ọrịa butere United, kpasuru ihe dị ka ndị ọrụ 36,000 oke nsogbu ahụ n'afọ gara aga.